NY FIAINAKO TALOHA FIVORIAKO IOAKA – Contos de Sacanagem
← MINHA PRIMEIA VEZ COM O NEGÃO
NY FIAINAKO TALOHA FIVORIAKO IOAKA
Tsy maintsy natolotro foana ny rehetako, saingy tsy be herim-po mihitsy aho, satria manambady ary miditra amin’ny lehilahy hafa sarotra. Tamin’ity taona vaovao ity dia nahita ny toerana mety hanomezana ny ampondrako aho (tsy amin’ny olon-kafa, fa ho an’ny alika), nandeha nandeha niaraka tamin’ny fianakaviany ny anadahiko ary namela ahy ny lakilen’ny tokantranony hikarakara ilay lehilahy mainty amin’ny sary, mihodina mitodika. firapotsy.
Nalaiko ny panton ny vadiko ary nankany amin’ny tranon’ny rahalahiko aho hikarakara an’i Negão, hanova ny rano mba hanomezana lanja ary ny ampondrako koa lol.
Na dia eo aza ny fatiantoka dia mikarakara tsara azy, mijanona ao an-trano, mitafy eo am-pandriana eo am-pandriana … Mikarakara ny azy ny zaobaviko. Nataoko ny panton ny vadiko ary niantso an’i Negão aho hatrizay, efa roa taona izy ary tsy mba niampita lalana mihitsy izy ary nantenainy fa niaraka tamiko taloha.
Nanomboka nitsako akoho aho, nefa toa tsy tiany ilay izy ary nanontany tena ahy izy, saingy nanapa-kevitra fa hohanin’ity alika ity aho tamin’io andro io. Nankany an-dakozia aho ary nahazo ronono voaroy, ary napetrako teo amboniko ilay izy fa nanahy mafy zavatra mafy tao anatiny aho, tao an-dakozia dia toy ny zazakely ary niantso azy.
Somary niahiahy kely i Negão, satria tsy dia zatra izany ilay izy fa nanana ny tsy izy izy, dia azoko izay tadiaviko. Nanomboka nilelaka ahy ny alika, nihomehy tamim-pitiavana ny vatako, indrindra rehefa nitsoka tao anaty ampondrako izy dia tiako ny fikao ato anatiko, nitaona ahy mafy sy mafy kokoa i Negão ka nihodina teo amin’ny snout-ko aho. notohizany foana aho, ny lelany masiaka no nahatonga ahy hahatsapa ho matsiro.
Teo amin’ny efatra aho dia niandry fatratra ny fanapahany ahy, fa ny alika kosa tsy nanakana ny fantsom-baravarako hisokatra ka natolotra azy ho toy ny amboaram-peo. Tsy afaka alaina intsony aho izao, tsy maintsy ao anatin’io aho io. Noraisiko ny iray tamin’ny lambany ary natsipiko teo amin’ny vatako izany, dia takany ny tiko ary nitaingina ny ampondrako nitazona ahy tamin’ny paosin-tongotra matevina mafy dia mafy izy, ary nanomboka latsaka niezaka ny nikapoka ny loaka, nanandrana ela loatra nefa tsy mahomby.
Mandra-pahatonga azy ho marina !!! Aiiii… Mampahafaly, Negão stick !!! Nikiakiaka moramora aho toy ny hoe takany ny zavatra noteneniny. Nataony teo akaikiko ny lohako ary nokapohiko mafy, nahafinaritra ahy ny fahafinaretana, niroso haingana i Negão, ary nanampy be dia be aza aho ny hahatongavana teo ambany tao anatiny, nanosika ny andilako hamely ny ny vatanao, izany hoe, eo amin’ny tehinao voalalotra daholo.
Tsy maintsy nieritreritra aho fa ny alika mifikitra foana, ary ny fikarohana teo aloha dia nanomboka nitombo ny volomasony hanokatra sy hanitatra ny ampondrako, Rehefa nahatsapa ny hafanan’ny tsina nataonao aho, nandriaka ahy toy ny renirano !! ! Ary nanana orgasme loatra aho na oviana na oviana! Nikiakiaka tamim-pifaliana aho ary nahatsapa izay rehetra mandalo ahy. Toy ny hoe teo aho, toy ny solony, ny hafanana amin’ny hafanana no tantanan’ny alika. (rehefa avy nanao fikarohana dia hitako ny dondoko) efa nanao 20 minitra aho ary niara-nipetraka taminay avy izahay, saingy tena tsara tokoa ny mahatsapa fa ny mpanafika ao anaty vatako mangetaheta firaisana.
Avy eo nisy fihetseham-po mirehitra nefa mbola nankafiziko ihany, fahatsapana mahafinaritra, tao anaty koziny, nihena, nisosa ary nibebaka, mandra-pahafahany nandao ny tenany tao anatiko. Rehefa nivoaka io, tonga tokoa ny fisolokiana ka tsy fantatro akory hoe ahoana no nahaizako mihazona izany an-tsokosoko hatry ny ela. Lehibe tokoa ny tongotro nihazakazaka nidina ny gorodona.
Nanana fahasahiranana aho, nilelaka ny tongotro, saingy na dia nandeha nandeha an-tongotra sy nanadio izany rehetra izany aza aho ary i Negão foana no teo anilako, satria fantatro fa hatramin’izay fotoana izay, dia ho alika anao aho.